Politika Fiarovana - Election Society
dia manolo-tena hiaro ny fiainanao manokana. Mifandraisa aminay raha manana fanontaniana na olana ianao momba ny fampiasana ny pejinao manokana ary ho faly hanampy anao izahay.
Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity sy / sy ny serivisinay, dia manaiky ny fanodinana ny mombamomba anao manokana ianao, araka izay voafaritra amin'ity politika ity.
Famaritana ampiasaina ato amin'ity politika ity
Ireo fitsipika fiarovana arahintsika
Inona avy ny zonao momba ny momba anao manokana?
Daty manokana momba anay angonina momba anao
Ahoana ny fomba ampiasanay ny pejinao manokana
Iza koa no mahazo ny data manokana
Ahoana no ahafahantsika miaro ny angona
Personal Data - ny vaovao rehetra mifandraika amin'ny olona voajanahary fantatra na fantatra.
fanodinana - ny asany na ny asa atao izay atao amin'ny Datafin'ny Personal na ny Datam-piainana manokana.
Data subject - olona araka ny nofo izay manana azy manokana.
ankizy - olona araka ny nofo amin'ny 16 taona.
Izahay / antsika (na kapitalisma na tsia) -
Fiarovana Fiarovana ny Daty
Mampanantena izahay ny hanaraka ireo toro lalana fiarovana manaraka ireto:
Ny fanitsiana dia ara-dalàna, ara-drariny, mangarahara. Ny asa aman-draharaha ataontsika dia manana zo ara-dalàna. Heverinay foana ny zonao mialoha ny momba ny Personal Personal Data. Hanome anao fanazavana momba ny Processing amin'ny fangatahana izahay.
Ny fikarakarana dia voafetra ihany amin'ny tanjona. Ny hetsika fanodinana ataonay dia mifanaraka amin'ny tanjon'ireo tangalamena manokana.
Ny fanitsiana dia atao amin'ny angona madinika. Samy manangona sy manova ny isam-pamokarana madinika indrindra takiana amin'ny tanjona rehetra.
Ny fikarakarana dia voafetra amin'ny vanim-potoana. Tsy hitazona ny angon-drakitrao manokana izahay mandritra ny fotoana ela noho ny ilaina.
Hanao izay rehetra vitantsika isika mba hiantohana ny fahamarinan'ny angona.
Hanao izay tsara indrindra vitantsika isika mba hiantohana ny fahamendrehana sy ny tsiambaratelo ny angona.
Zon'ny data subject
Ny lohahevitry ny data dia manana zo manaraka:
Ny zo amin'ny fampahalalam-baovao - midika izany fa manan-jò fantatra ianao raha toa ka mipoitra ny Data manokana anao; inona no angona angonina, avy aiza no ahazoana azy ary nahoana ary amin'ny alalan'io no anaovana azy.
Ny zo hahazo izany - midika izany fa manan-jo hidirana amin'ireo angona nangonina avy amin'ny / anao. Anisan'izany ny zonao hiangaviana sy hahazo ny dika mitovy amin'ny anao manokana.
Zo amin'ny fanitsiana - izay midika fa manan-jo hangataka ny fanitsiana na ny fanesorana ny mombamomba anao ianao izay tsy marina na tsy tanteraka.
Ny zo hanafoana - izay midika ao anatin'ny toe-javatra sasany dia azonao atao ny mangataka ny mombamomba anao manokana mba hialana amin'ny rakitsoratra.
Ny zo hamerana ny fanodinana - izay midika hoe raha misy fepetra ny fepetra sasany, dia manan-jo hametra ny fizotran'ny Data manokana anao ianao.
Ny zo hanakiana ny fanodinana - izay midika fa amin'ny tranga sasany dia manana zo hibaiko ny fanodinana ny Datam-bahoaka ianao, ohatra amin'ny trosa mivantana.
Ny zo hanakiana ny Processing automatique - izay midika fa manan-jo hanohitra ny Processing automatique, anisan'izany ny profiling; ary tsy hanaiky ny fanapahan-kevitra mifototra amin'ny automatisation Processing. Io zo io dia azonao ampiasaina isaky ny misy ny vokatry ny famolavolana izay mamokatra vokatra ara-dalàna mahakasika anao na misy fiantraikany lehibe aminao.
Ny zo amin'ny fampitaovana ny portabilité - manana zo hahazoanao ny Daty manokana ao anaty rafitra azo vakiana ianao na raha azo atao, toy ny famindrana mivantana avy amin'ny Processor iray ho an'ny hafa.
Ny zo hitakiana fitarainana - raha tsy mandà ny fangatahanareo amin'ny Zon'ny Access, dia hanome anao antony iray ny antony. Raha tsy afa-po amin'ny fomba nomanina ny fangatahanao dia mifandraisa aminay.
Tsara ho an'ny fanampiana manam-pahefana mpanara-maso - midika fa manan-jo hahazo ny fanampian'ny manampahefana mpanara-maso ianao ary ny zo hanaraka fitsaboana hafa toy ny fitakiana ny fahavoazana.
Ny zo hanaisotra ny fandeferana - manana zo ianao hanaisotra ny fankatoavana rehetra momba ny fanatanterahana ny mombamomba anao manokana.
Data angonina isika
Fampahalalana nomenao anay
Mety ho adiresy imailakao, anaranao, adiresy faktiora, adiresy an-trano, sns. - indrindra indrindra ny fampahalalana izay ilaina amin'ny fanolorana anao vokatra / fanompoana na fampivoarana ny mombamomba ny mpanjifa miaraka aminay. Mamonjy ny fampahalalana omenareo izahay mba hahafahanao mamaly na manatanteraka asa hafa ao amin'ny tranonkala. Ity fampahalalana ity dia ahitana ny anaranao sy ny adiresy imailakao.
Hahita anao ny automatique
Anisan'izany ny fampahalalana izay arotsak'ireo cookies sy fitaovana hafa ho an'ny session. Ohatra, ny fampahalalana sarim-pifanakalozan-kevitra, ny adiresy IP, ny tantaran'ny fividiananao (raha misy) sns. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa. Rehefa mampiasa ny serivisinay ianao na mijery ny votoatin'ny tranonkala dia mety ho voarakitra ny zavatra ataonao.
Fampahalalana avy amin'ny mpiara-miasa
Manangona vaovao avy amin'ireo mpiara-miombona antoka izahay miaraka amin'ny fanamafisana fa manana antony ara-dalàna izy ireo hizarana izany vaovao izany aminay. Izany dia ny fampahalalana nomenao azy mivantana na ny hoe izy ireo no nivory teo aminao teo amin'ny sehatra ara-dalàna hafa. Ity lisitra ity dia: Ny NCS Trust, EFL Trust.
Fampahalalana ho an'ny besinimaro
Azontsika atao ny manangona vaovao momba anao izay ampahibemaso.
Mampiasa ny Daty manokana anao izahay mba:
Manolotra ny fanompoana ho anareo izahay. Anisan'izany ohatra ny fisoratana anarana ny kaontinao; manome anao vokatra sy serivisy hafa izay nangatahinao; manome anao amin'ny dokam-barotra amin'ny fangatahanao sy ny fifandraisana aminao amin'ny fifandraisana amin'ireo vokatra sy serivisy; mifampiresaka sy mifandray aminao; ary mampahafantatra anao ny fanovana amin'ny asa fanompoana rehetra.
hampitombo ny traikefanao amin'ny mpanjifa;
manatanteraka adidy araka ny lalàna na fifanekena;
Ny fifandraisanao amin'ny fandaharam-pampianarana tanora iray na ny zanakao dia voasoratra anarana;
momba ny tantaran'ny fahombiazan'ny fandaharantsika tanora;
hanohana anao na ny zanakao amin'ny fandaharan'asa tanora
Ampiasainay ny mombamomba anao manokana momba ny antony ara-drariny sy / na ny fanekena anao.
Noho ny antony nanaovana fifanekena na fanatanterahana ny adidin'ny fifanarahana dia mametraka ny pejiny manokana ho an'ny tanjona manaraka isika:
mba hamantarana anao;
Hanolotra anao fanompoana na handefa / hanome anao vokatra iray;
hifandraisana na mivarotra na famandrihana;
Amin'ny maha-tombontsoa ara-drariny azy dia manova ny mombamomba ny tena manokana izahay amin'ny tanjona manaraka:
mba handefa tolotra manokana * (avy aminay sy / na mpiara-miasa voafantina);
mba hikarakarana sy handinihana ny vondron'ny mpanjifa (fividianana ny fitondran-tena sy ny tantara) mba hanatsarana ny kalitao, ny karazana ary ny fampiasana ny vokatra / ny tolotra omena / omena;
mitantana ny valin'ny fanontaniana momba ny fahafenoan'ny mpanjifa;
Raha mbola tsy nampahafantarinao anay hafa izahay dia mieritreritra ny hanome anareo vokatra / tolotra izay mitovy na mitovy amin'ny fividianana tantara / fitadiavam-bola mba ho tombontsoa ara-drariny.
Miaraka amin'ny fanekenao izahay dia manova ny mombamomba anao manokana amin'ny tanjona manaraka:
handefa mailaka sy tolotra fanentanana (avy aminay sy / na mpiara-miasa voafantina);
Ho an'ny tanjona hafa dia nangataka ny fanekenareo izahay;
Manao ny data manokana izahay mba hanatanterahana ny adidy miorina amin'ny lalàna ary / na hampiasa ny Daty manokana ho an'ny safidy nomen'ny lalàna. Manakana ny zo tsy hitonona anarana momba ny Personal Data izahay ary nampiasa izany tahiry izany. Tsy hampiasa ny angon-drakitra ivelan'ny sehatra amin'ity politika ity isika raha tsy misy anonymised. Tsy manangona fampahafantarana toy ny karatra amin'ny carte de crédit isika. Hahavatsika ny vaovao mividy momba ny fividianana momba anao ianao raha mbola ilaina ho an'ny tanjon'ny kaonty na adidy hafa avy amin'ny lalàna, fa tsy mihoatra ny 5 taona.
Azontsika atao ny manova ny mombamomba ny tena manokana ho an'ny tanjona fanampiny izay tsy voalaza eto, fa mifanaraka amin'ny tanjona voalohany narahina angonina. Mba hanaovana izany, dia hiantoka fa:
Ny fifandraisana eo amin'ny tanjona, ny toe-javatra ary ny natiora ny Data manokana dia mety ho an'ny Processing fanampiny;
Ny fanodinana bebe kokoa dia tsy hanimba ny tombontsoanao ary
dia mety hisy fiarovana mifanentana amin'ny Processing.
Hanome vaovao aminao momba ny Fanodinana sy ny tanjona fanampiny izahay.
Iza no afaka miditra ao amin'ny pejiny manokana
Tsy mizara ny mombamomba anao amin'ny olon-tsy fantatra izahay. Ny tarehimarika manokana momba anao dia amin'ny toe-javatra sasany omena ny mpiara-miombona antoka aminay, mba hahafahanao manolotra ny fanompoana ho anareo na hampitombo ny traikefan'ny mpanjifa. Mizara ny angon-drakitrao izahay:
Our partner partners:
Paypal ho an'ny fandoavam-bola. Ampahafantarina anao rehefa misy izany dingana izany.
Ireo mpiara-miasa aminay:
Ny NCS Trust - ho an'ny programa NCS ihany.
EFL Trust - ho an'ny programa NCS ihany.
Miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka atao amin'ny Processing ihany izahay izay afaka miantoka ny fiarovana tsara amin'ny data manokana. Mampahafantatra ny mombamomba ny tena manokana amin'ny antoko fahatelo na mpiasam-panjakana isika rehefa adidintsika ara-dalàna. Azontsika atao ny manambara ny Antontan-taratasinao manokana amin'ny antoko fahatelo raha manaiky izany ianao na raha misy antony hafa ara-dalàna.
Manao izay tsara indrindra vitantsika izahay mba hitazonana ny mombamomba anao manokana. Mampiasa protocoles azo antoka amin'ny fifandraisana sy ny famindrana angona (toy ny HTTPS). Mampiasa ny anarana tsy fantatra anarana sy ny pseudonymising izay mety. Manara-maso ny rafitra misy anay izahay noho ny mety ho vulnerability sy ny fanafihana.
Na dia miezaka mafy aza izahay dia tsy afaka manome toky ny fiarovana ny vaovao. Na izany aza, mampanantena izahay ny hampandre ny manam-pahefana mifanaraka amin'ny fandikan-dalàna. Hanamarina anao ihany koa ianao raha misy fandrahonana ny zonao na ny tombontsoanao. Hanao izay rehetra azontsika an-tsaina isika mba hisorohana ny fandikan-dalàna sy ny fanampiana ny manampahefana dia tokony hipoitra.
Raha manana kaonty aminay ianao, mariho fa tsy maintsy mitandrina ny anaranao sy ny tenimiafinao miafina ianao.
Tsy mikasa ny hanangona na hampahafantarana ny vaovao avy amin'ireo ankizy ao anatin'ny taona 14 amin'ny tranonkalanay. Amin'ny maha-fiantrana tanora azy, misy fepetra ny fanangonana vaovao momba ireo tanora liana, na ny fandaharan'asa. Ny ray aman-dreny dia mifandray amin'ny momba io angon-drakitra io rehefa omena angona avy amin'ny ray aman-dreny.
Cookies sy teknolojia hafa ampiasaintsika
Mampiasa cookies sy / na teknolojika mitovy amin'izany izahay mba handinihana ny fitondran-tenan'ny mpanjifa, ny fitantanana ny tranonkala, ny fanarahamaso ny mombamomba ny mpampiasa, ary ny fanangonana vaovao momba ny mpampiasa. Natao izany mba hahafahanao manokana sy hampitombo ny traikefanao miaraka aminay.
Ny cookie dia rakitra an-tsoratra voafetra eo amin'ny solosainao. Ny cookies dia mitahiry fampahalalana izay ampiasaina hanampiana ny tranokalan'ny asa. Ny hany azontsika atao dia ny miditra amin'ireo cookies novokarin'ny tranonkala. Azonao atao ny mifehy ny kitaponao amin'ny sehatry ny tranokala. Ny fisafidianana ny fandroana cookies dia mety hanakana ny fampiasanao ireo fepetra sasany.
Mampiasa cookies izahay amin'ity tanjona manaraka ity:
Kitendry tsy maintsy ilaina - ireo cookies dia takiana aminao mba hahafahanao mampiasa endri-javatra manan-danja ao amin'ny tranokalantsika, toy ny fidirana ao. Tsy manangona fampahalalana manokana ireo cookies ireo.
Fomba fanaovana cookie fonctionnaire - ireo cookies dia manome fahafaha-manao izay ampiasaina amin'ny fomba ampiasanay ny serivisy ary manome izay mety ho endri-javatra manokana. Ohatra, mety hitadidy ny anaranao sy ny mailaka amin'ny endrika fanamarihana izy ireo ka tsy mila averinao averina averina amin'ny manaraka indray ity vaovao ity.
Ny cookie analytics - ireo cookies dia ampiasaina hanaraha-maso ny fampiasana sy ny fahombiazan'ny tranonkala sy ny serivisy
Hafatra cookies - ireo cookies dia ampiasaina mba hanafatra dokam-barotra izay mahaliana anao sy ny tombontsoanao. Ankoatra izany, ampiasaina izy ireo hametra ny isan'ireo fotoana ahitanao dokam-barotra. Matetika izy ireo no mametraka ny tranonkala amin'ny alàlan'ny dokam-barotra amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny tompon'ny tranonkala. Ireo cookies ireo dia mahatsiaro fa nitsidika tranokala iray ianao ary nizara tamina fikambanana hafa toy ny dokam-barotra. Matetika ny sivana na famokarana cookies dia hampifandraisina amin'ny asa fijerin'ny fikambanana hafa.
Azonao atao ny manala cookies voatahiry ao amin'ny ordinateranao amin'ny alàlan'ny fanovan'ny navigateur anao. Azonao atao koa ny mifehy ny seho an-dakozia 3rd amin'ny alàlan'ny fampiasana sehatra fampivelarana malalaka toy ny optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny cookies, tsidiho allaboutcookies.org.
Mampiasa ny Google Analytics izahay handrefesana ny fifamoivoizana ao amin'ny tranokalanay. Google dia manana ny politikany manokana izay azonao jerena Eto. Raha te hiala amin'ny Google Analytics ianao, tsidiho ny Google Analytics pejin-pejy.
Fepetra ankapobeny ho an'ny Data any Angletera - https://ico.org.uk - ICO - Office Commissariat Information
Fikambanana Elefanta - miantso ny 0114 2999 214 hifanakalozana data.
Mijanona ho zo hanao fiovana amin'ity Politika Fiarovana Fiarovana ity izahay.
Ny fanovana farany dia natao 21 / 05 / 2018.